प्रचण्डले १३ वर्ष अघि नै जनयुद्धलाई दिल्लीमा लगेर साम्राज्यवादलाई बुझाएका थिए : बुढामगर, नेता नेकपा-Nepali online news portal
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सन्ताेष बुढामगरले प्रचण्डले जनयुद्धलार्इ १३ वर्षअघि नै दिल्लीमा लगेर बुझाएकाे अाराेप लगाएका छन् ।
त्यही दिल्लीमा लगेर जनयुद्धलार्इ बुझाएपछि १२ बुँदे समझदारी बनेकाे र त्यहीबाट प्रचण्डकाे पतनकाे दिन शुरू भएकाे नेता बुढामगरकाे भनार्इ छ । अहिले प्रचण्डले माअाेवादी केन्द्रलार्इ एमालेमा लगेर विलय गराउनु त्यसैकाे जग भएकाे बुढाकाे दाबी छ ।
अाफ्नाे पार्टी निकट पत्रिका राताेखबरलार्इ अन्तर्वार्ता दिदै बुढामगरले यस्ताे बताएका हुन् । बुढामगरसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश –
यहाँले नेपालको अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेपालको तात्कालिक परिस्थिति एउटा महान् अवसर र चुनौतीबीच महान् सम्भावनाको ढोका उघार्दै अगाडि बढेको छ । क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, दलाली र आत्मसमर्पण, दमन र प्रतिरोध, राजनीतिक ध्रुवीकरण र क्रान्तिकारी रूपान्तरण नै अहिलेको राजनीतिक यथार्थ हो । बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको लगातार हस्तक्षेप र सत्तासीन दलालहरूको लगातार आत्मसमर्पण र देशभक्त क्रान्तिकारीहरूको विरोध र प्रतिरोधले देश क्रान्तिकारी परिवर्तन र रूपान्तरणको दिशातिर हुइँकिरहेको छ । दलाली, आत्मसमर्पण, राष्ट्रघात, जनघात, मूल्यवृद्धि–महँगी, भ्रष्टाचार, तस्करी, दमन, हत्या, लूट, सामाजिक हिंसा, चोरी, डकैती आदि यो व्यवस्थाको अनिवार्य विशेषता बनेको छ । यसको प्रतिरोधमा हुने, विद्रोह, आन्दोलन, क्रान्ति यसको अनिवार्य बाटो बनेको छ । परिस्थितिले यही वरिपरि लुकामारी खेलिरहेको छ ।
अब साम्राज्यवादीहरूको एक मात्र मिसन नेपाललाई आफ्नो कठपुतली र क्रिडास्थल बनाउनेमा छ र त्यो हाम्रो पार्टी र देशभक्ति नेपाली जनताको कारणले सम्भव छैन । यसको अनिवार्य परिणति हुन्छ– ‘दमन र प्रतिरोध ।’ जस बेला उनीहरू दमनको मात्रा बढाएर सामाजिक फासिवादसम्म पुग्नेछन्, जनताद्वारा त्यसको शक्तिशाली प्रतिरोध हुनेछ । यसले क्रान्तिलाई जन्म दिनेछ । यसले उनीहरूको अन्तिम अन्त्येष्टि गर्नेछ । परिस्थितिले यही सङ्केत गरिरहेको छ ।
भर्खरै मात्र एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता भएको छ । यो परिघटनाप्रति यहाँहरूको धारणा के हो ?
उनीहरूले आफूलाई सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भनिराखेका छन् । अब समाजवाद यहीँबाट लागू गर्ने भनिराखेका छन् । तर यहाँहरूले वैज्ञानिक समाजवादका कुरा गर्नुभएको छ । उनीहरूले भनेको समाजवाद र यहाँहरूले भनेको वैज्ञानिक समाजवादका बीचमा केकस्ता भिन्नता रहेका छन् ?
दोस्रो, नक्कली कम्युनिस्टहरू मानवस्वरूपका रोबोट सोफियाजस्ता कसैको रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्नेहरूको कथित समाजवाद यान्त्रिक र काल्पनिक समाजवाद मात्र हो । यसमा कुनै भ्रममा पर्न जरुरी छैन । त्यसैले समाजवाद एउटै हुन्छ, कम्युनिस्ट पनि एउटै हुन्छ, दुईटा हुँदैन । यसबारेमा पनि भ्रममा पर्न जरुरी छैन । उनीहरू साम्राज्यवादका पहरेदार हुन् । उनीहरू कम्युनिस्ट आवरणका संसद्वादी पुँजीवादका एजेन्ट (दलाल) हुन् । यस्ता दलालहरूले भन्ने गरेको समाजवाद हावाको महल मात्र हो । हावामा उड्न मान्छेहरूले हावाकै कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरूको समाजवादको नारा केवल भोट बैङ्कका लागि रोमान्टिक विज्ञापन (ख्यतभ अयििभअतष्यल बमखभचतष्कझभलत) मात्र हो जब कि हाम्रो पार्टीले भनेको समाजवाद ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ हो । यो भिन्नै चीज हो । माक्र्स–एङ्गेल्सले अगाडि सारेको र लेनिन, स्टालिन, माओहरूले विकास गरेको समाजवादको पृष्ठभूमिमा नेपालको मौलिकतामा स्थापना गरिने समाजवाद हो । हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा आम नागरिकलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता, मनोरञ्जन आदिको ग्यारेन्टी भएको व्यवस्था हो जसको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिन्छ । अधिकार सम्पन्न जनता, शान्ति, समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समानतामा आधारित समाज व्यवस्था हो ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ जो यो संसदीय व्यवस्थाबाट सम्भवै छैन र कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।
यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरूले यसलाई समाजवादको आधार खडा गर्ने बजेट भनेका छन् । यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति यहाँहरूको धारणा कस्तो रहेको छ ?
तपाईंको नेतृत्वमा केन्द्रीय जनपरिषद् गठन भएको छ । यसले अहिले के गरिराखेको छ ?
यो क्रान्तिकारी सत्ताको प्रारूप भन्दै आउनुभएको छ । यसका नीति तथा कार्यक्रमहरू केके हुन् ?
वर्तमान राज्यसत्ताप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले जनताका काम कसरी गरिराख्नुभएको छ ?
नेपालको अबको राजनीति कसरी जान्छ होला ? यहाँहरूका कार्यक्रमहरू कसरी जानेछन् ?
हामी एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोबाट आमजनता र देशभक्त तथा सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरूलाई एकीकरण र ध्रुवीकरण गर्दै यो देशलाई ती दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट तत्वहरूबाट एक न एक दिन मुक्त गर्नेछौँ र शान्ति, समृद्धि, स्वाधीनता र समानताको वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यमा मुलुकलाई पु¥याउनेछौँ । यसका लागि नेपालमा एउटा शक्तिशाली आन्दोलन वा विद्रोह बाँकी छ । त्यसमा एकपटक नेकपाको नेतृत्वमा हुने एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था प्राप्तिका लागि एकपटक साथ र समर्थन दिन सबै न्यायप्रेमी जनता, देशभक्त शक्तिहरू र क्रान्तिकारी वर्गमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
मेरो र पार्टीको विचार जनतासमक्ष पु¥याउन अवसर दिएकोमा रातो खबर परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासमेत गर्दछु ।